‘फाटेको जुत्ता’मा प्रियंका र सौगातको झगडा ! | THE CINEMA TIMES
सुको नभएनी बिन्दास सलोन र कबिर !
”बेबि आई लव यू”को प्रोमो सार्वजनिक
‘’स्वर्ग मेरो गाउँ’’आज बाट रिलिज
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । एकाविहानै ललितपुरको कार्यविनायक मन्दिरमा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई अभिनेता सौगात मल्लले जिस्क्याउदै थिए । त्यतिनै बेला वरपर रहेका मानिसहरु यी दुईको द्वन्द हेर्न झुम्मिए ।
प्रियंकाले रिसाएर सौगातलाई अंकित गरेर को हो यो ? भन्दै पराया बनाउदै थिइन् । तर, सौगातले मायालु पारामा प्रियंकाको धज्जी उडाउदै थिए । जब, सौगातले जिस्क्याउदै प्रियंकाको शरीरमा छुन्छन । तब, प्रियंका झर्किदै के गरेको के यो ? भनेर प्रश्न गर्छिन । अनि सौगातले प्रतिप्रश्न गर्छन ‘अच्छा .. अरे वा … अअह .. काठमाडौँको हावा लागेछ ह ?’ अनि ( आफ्नो वरिपरी हावा फुक्दै घुमेर फेरी प्रियंकाकै अनुहारमा कपालनै उड्ने गरी फुकीदिन्छन) । र पुन प्रश्न गर्छन । कस्तो लाग्यो त ?
प्रियंका झनै रिसाउछिन । र, वरिपरी हेर्दै पहलमानलाई गुहार्छिन । अनि सौगात पनी डराउदै वरिपरी हेर्छन । तर, त्यहाँ कोहि पहलमान आउदैन । यतिकैमा झगडा हेर्न भेला भएका मानिसहरुले ताली वर्षाउछन । र, प्रियंका र सौगातको अनुहारमा पनी हाँसोको फोहोरा छुट्छ । यो परिदृश्य रियल नभएर रिलको हो । जहाँ विहिवार ललितपुरको कार्यविनायक मन्दिरमा निर्माता अर्जुनकुमारले नयाँ कार्यको थालनी गरे ।
‘चपली हाइट २’ निर्माताले यसपटक निर्माण गर्ने फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’को लागी निकेश खड्कालाई निर्देशनको जिम्मा सुम्पेका छन् । पूर्णतया कमेडी कथामा निर्माण गरिने फिल्मका अन्य कलाकारहरुमा वुद्धि तामाङ, कामेश्वर चौरासिया र रविन्द्र झा रहेका छन् । फिल्म छायांकनका लागी निर्माण टोली आजनै विरगंज तर्फ लागेको छ । करिब एक महिनाको सुटिङ सेड्युल बनाइएको यो फिल्मलाई यहि बर्षको कार्तिक १७ गते रिलिज गरिने बताइएको छ ।
Tags:buddi tamang, kameswar chaurasiya, priyanka karki, rabindra jha, saugat malla
‘फाटेको जुत्ता’मा प्रियंका र सौगातको झगडा !0out of5based on0ratings.0user reviews.
Hollywood	Jan 27, 2018
एनएफडिसी अवार्ड: ‘लिलिबिली’ र ‘शत्रु गते’ सर्वाधिक विधामा मनोनित Apr 21, 2018
सुरु भयो सुशीलको ‘बादशाह जुट’ Apr 21, 2018
आनाकानी गर्ने हललाई कानुनी दायरामा ल्याइने: निकिता पौडेल Apr 21, 2018
सुको नभएनी बिन्दास सलोन र कबिर ! Apr 21, 2018
”बेबि आई लव यू”को प्रोमो सार्वजनिक Apr 20, 2018
‘’स्वर्ग मेरो गाउँ’’आज बाट रिलिज Apr 20, 2018
निर्माताहरु आन्दोलनमा उत्रने, Apr 20, 2018
‘सयकडा दश’ छायांकन सुरु Apr 17, 2018
‘डमरुको डण्डीबियो’अष्ट्रेलियामा रिलिज हुँदै Apr 17, 2018
Exclusive: ‘रानीमहल’मा निकिताको अपोजिट प्रितमराज फाईनल Apr 15, 2018